सांसद खगराजको स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई प्रश्न : खोपको मूल्य कति हो ? – Health Post Nepal
सांसद खगराजको स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई प्रश्न : खोपको मूल्य कति हो ?
२०७८ साउन २१ गते १५:४८
नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले कोरोना खोपको मूल्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग गरेको छलफलमा सांसद अधिकारीले हालसम्म खरिद भएका र खरिदका क्रममा रहेका सबै खोपको मूल्य सार्वजानिक गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
‘मोर्डना, भेरोसेल, जोनसन एण्ड एण्ड जोनसनको मूल्य कति हो? यो हामीले थाहा पाउनुर्पयो,’ अधिकारीले राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रश्न गरे, ‘भ्याक्सिनको मूल्य के हो ? कसरी नेगोसिएसन भयो? यो हामीले थाहा पाउनुपर्छ।’
चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मसँग ४० लाख डोज खोप खरिदका लागि अघिल्लो सरकारले नन डिस्क्लोजेबल एग्रिमेन्ट गरेको थियो ।
थप ६० लाख भेरोसिल खरिदका लागि सिनोफार्मसँग सम्झौता गरेको छ।
त्यसैगरी, फाइजरको ४० लाख, मोर्डनाको ४० लाख खोप खरिदका लागि विश्व बैंकमार्फत भुक्तानी गरेको छ ।
जोनसन एण्ड जोनसनको ५० लाख, फाइजरको ४० लाख र एस्ट्राजेनेकाको २० लाख खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ । १२ देखि १८ वर्षसम्मका किशोरकिशोरीका फाइजरको ६० लाख खोप पनि खरिदको प्रक्रियामा छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंसिर सम्ममा करिब २ लाख कोरोना संक्रमित थपिने प्रक्षेपण गरेको छ।
जसअनुसार मंसिरसम्ममा १ लाख ९३ हजार ८ सय ५६ संक्रमित थपिने सम्भावना छ। जसमध्ये ३८ हजार ७ सय ७१ जनालाई उपचार सेवा आवश्यक पर्ने र ९ हजार ६ सय ९३ जनालाई सघन उपचार आवश्यकता पर्न सक्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण उल्लेख छ।